Ike nke mmiri ma ọ bụ ikike ikuku na osisi ike ya | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Ike mmiri ma ọ bụ ike ikuku
Daniel Palomino | | Ike mmiri, Ike imeghari ohuru, General, Gburugburu
Ike nke ebili ma ọ bụ karịa ndị sayensị maara dị ka ikike ikuku bụ nke na-esite na njigide mmiri, nke ahụ bụ, ihe dị iche na nkezi nke oke osimiri dịka ọnọdụ nke ụwa na ọnwa dị na nke ahụ na-esite na ike ndọda nke ikpeazụ na Sun na mmiri mmiri nke oke osimiri.
Na okwu a anyị nwere ike ikwu na ngagharị nke mmiri, nke emere site na mma nke ọnwa ugboro abụọ n'ụbọchị, enwere ike iji ya dị ka isi iyi ike.
Ije a mejuputara ịrị elu nke oke osimiri, nke nwere ike ichebara echiche n'akụkụ ụfọdụ.
Ọnwa na-efunahụ ike ya, nwayọ nwayọ, ma na-ewepụta ikike ikuku, nke na - eme ka ọ dịrị na ọdịiche dị ukwuu na ụwa.
Onu ogugu nke ike nke udiri ihe dika 3,1012 watts, ma ọ bụ ihe dị ka 100.000 ugboro na-erughị nkezi nke ìhè anyanwụ na-enweta n'ụwa.
Ọ bụghị nanị na ikike ebili mmiri na-emetụta oke osimiri, na -emepụta ebili mmiri, mana ha kwa emetụta ihe dị ndụ dị ndụ, na-ewepụta ihe ndị dị mgbagwoju anya dị ndụ nke mejupụtara akụkụ nke biorhythms ndị sitere n'okike.
Oke mmiri ọnwa na-ewepụta n’oké osimiri erughị otu mita, ma na ebe ndị ahụ nhazi nke mbara ala na-eme ka mmetụta nke ebili mmiri pụta, mgbanwe nke ọkwa ka ukwuu nwere ike ime.
Nke a na - eme na obere mmiri na - emighị emi, dị na shelf ụwa ma ọ bụ mpaghara ndị a ka mmadụ nwere ike iji nweta ike site na ike ikuku.
1 Iji ike eme ihe
2 Iji ike eme ihe
3 Nkesa nke ebili na ụwa
4 Ike ikuku na Spain
5 Uru na ọghọm nke ike ikuku
Iji ike eme ihe
N'adịghị ka ihe mmadụ nwere ike iche banyere ike ikuku, ọ dịla kemgbe ogologo oge gara aga, n'Ijipt oge ochie ejiri ya na Europe ọ malitere iji ya na narị afọ nke XNUMX.
Na 1580, a wụnyere wiil anọ na-emegharị emegharị n'okpuru mgbada London Bridge iji gbapụta mmiri., nke gara n'ihu na-arụ ọrụ ruo 1824, ruokwa n'Agha Worldwa nke Abụọ, ọtụtụ igwe na-arụ ọrụ na Europe, nke jiri ike nke ebili mmiri.
Otu n’ime ndị ikpeazụ kwụsịrị ịrụ ọrụ na Devon, UK, na 1956.
Otú ọ dị, kemgbe 1945 enwechaghị mmasị na ike nchịkwa nke obere.
Ojiji nke ike ikuku na ụkpụrụ dị mfe ma dị oke nke yiri nke ike hydroelectric.
Agbanyeghị na enwere usoro dị iche iche, nke kachasị mfe nwere mmiri mgbochi mmiri, yana ọnụ ụzọ ámá na turbines hydraulic, nke dị na-emechi ọnụ mmiri (ọnụ, n'oké osimiri, osimiri sara mbara ma dị omimi, yana mgbanwe nnu na mmiri nnu a na mmiri ọhụrụ, n'ihi oke mmiri. ebe ebili mmiri nwere ogo dị elu.
Iji nyochaa ọrụ nke usoro ahụ nwere ike ịhụ na onyonyo abụọ a.
Ọrụ ahụ dị mfe ma nwee:
Mgbe ebili mmiri na-arị elu, a na-ekwu na ebili mmiri (ọnọdụ kachasị elu ma ọ bụ nke kachasị elu ruru tide), n'oge a ọnụ ụzọ meghere ma mmiri amalite toba nke ahụ na-enweta ala.
Mgbe oke mmiri gafere na ụgwọ mmiri zuru ezu ezuola, ọnụ ụzọ ámá ahụ emechi iji gbochie mmiri ịlaghachi n'oké osimiri.
N'ikpeazụ, mgbe obere ebili (ala kachasị dị ala ma ọ bụ nke kacha nta dị elu site na ebili mmiri), a na-ahapụ mmiri ahụ site na turbines.
Usoro dum nke ịbanye na mmiri n'ime oghere yana ụzọ ọpụpụ, turbines ahụ na-ebugharị igwe na-enye ọkụ eletrik.
Igwe eji eji eme ihe gha aghaghachighari nke mere na ha na-arụ ọrụ nke ọma ma mgbe mmiri batara n'ọnụ mmiri ma ọ bụ n'ọnụ ụzọ yana yana ịpụ.
Nkesa nke ebili na ụwa
Dika m kwuburu na mbu ebili mmiri na-abawanye site na nhazi nke mmiri mmiri na ụfọdụ kpọmkwem ebe, ebe ọ ga-ekwe omume iji ebili mmiri dị ka isi iyi nke ike, nke bụ n'ikpeazụ ihe na-amasị anyị.
Ebe kachasị ewu ewu ime nke a bụ:
Na Europe, na mmiri nke La Ranee na France, na Kislaya Guba na Russia, na Severn estuary na United Kingdom. Saịtị ndị a niile nwere oke ebili mmiri, na ịrị elu kwa ụbọchị na nso 11 ruo 16 mita.
Ọ bụrụ na anyị gaa South America, anyị ga-ahụ na ebili mmiri karịrị mita 4 n’akụkụ ụsọ mmiri nke Chile na mpaghara ndịda nke Argentina. Oke mmiri ruru mita iri na anọ na Puerto Gallegos (Argentina). Enwekwara saịtị ndị kwesịrị ekwesị n'akụkụ Belern na Sao Luiz, Brazil.
Na North America, na Baja California, na Mexico, nke ebili mmiri ruru mita iri, ekwupụtala dị ka mpaghara nwere ike iji ike ikuku. Na mgbakwunye, na Canada, na Bay of Fundy, e nwere oke ebili karịa mmiri 10 kwa.
Na Asia, edere oke ebili mmiri na Oke Osimiri Arabian, Bay nke Bengal, Oké Osimiri South China, n'akụkụ ụsọ oké osimiri Korea na Oké Osimiri Okhotsk.
Agbanye na Rangoon, Burma, ebili mmiri ruru mita 5,8. Na Amoy (Szeming, China), mita mmiri 4,72 na-eme. Ogologo ebili mmiri ahụ na Jinsen, Korea, karịrị mita 8,77 na Bombay, India, ebili mmiri ruru mita 3,65.
N’Australia, ebili mmiri dị mita 5,18 na Port Hedland na mita 5,12 na Port Darwin.
N'ikpeazụ, n'Africa enweghị ọnọdụ dị mma, ikekwe enwere ike wuru obere ọkụ ọkụ na ndịda Dakar, Madagascar na Comoro Islands.
N'ụwa niile, e nwere ihe dị 100 saịtị kwesịrị ekwesị maka owuwu ọrụ nnukwu-ọnụ ọgụgụ, ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ndị ọzọ ebe enwere ike ịrụ obere ọrụ.
Enwere ike iji ha mepụta ọkụ eletrik ebili n'okpuru mita 3, ọ bụ ezie na uru ya ga-adị ala karịa.
Kaosinadị, nwụnye nke ọdụ ụgbọ mmiri na-asọ asọ (ga-adị irè) ga-ekwe omume naanị n’ebe nwere ọdịiche dịkarịa ala mita 5 n’etiti oke na ebili mmiri.
Isi ihe ole na ole n'ụwa ebe ihe a mere. Ndị a bụ ndị bụ isi:
Na ngụkọta, ọ ga-arụnyere maka mmepụta nke ọkụ eletrik, na isi saịtị nke ụwa banyere 13.000 MW, ọnụ ọgụgụ kwekọrọ na 1% nke ike hydroelectric ụwa.
Na Spain ọmụmụ nke ike a na-rụrụ karịsịa site na Institute nke Hydraulics nke Mahadum Cantabria, nke nwere nnukwu ule nyocha maka nyocha na nyocha nke ihe a maara dika Osimiri Cantabrian na Osimiri Ocean (Injin mmiri).
Tankgbọ ahụ e kwuru n’elu bụ ihe dị ka mita 44 n’obosara na mita 30 n’ogologo, si otú a nwee ike ịmịgharị ebili mmiri ruo mita 20 na ifufe nke 150 km / h.
N'aka nke ọzọ, anyị na-adịghị ekpe, ebe ọ bụ na 2011 na osisi mbu nke di na Motrico (Guipuzkoa).
Njikwa akara nwere 16 turbines nwere ike ịmepụta 600.000 kWh kwa afọ, ya bụ, ihe narị mmadụ isii na-eri na nkezi.
Na mgbakwunye, ekele maka etiti a ọtụtụ narị tọn CO2 agaghị abanye na mbara igwe kwa afọ, e mere atụmatụ na o nwere otu ụdị mmetụta ịdị ọcha nke nwere ike ịkpata a ohia nke ihe dika hectare 80.
Ọrụ a nwere ngụkọta ego nke ihe dị ka nde euro 6,7, nke ihe dị ka 2,3 bụ maka osisi na ihe fọdụrụ maka ọrụ na ọdụ ụgbọ mmiri.
Igwe turbines, nke obula na emeputa ihe dika 18,5 KWh, kewara n'ime otu nke 4 ma di n'ime igwe igwe, n'elu ugbo elu.
Ọzọkwa, ebe a na-echebe ha dị na otu akụkụ ngalaba gbara ọkpụrụkpụ nke dike nke nwere ịdị elu mmiri nke mita 7 na ihe dịka 100 mita n'ogologo.
Ike ikuku nwere ọtụtụ uru na ụfọdụ n’ime ha bụ:
Ọ bụ nke na-anaghị agwụ agwụ isi iyi nke ume na emere maka mmeghari ohuru.
Nke a ekesa na nnukwu ebe nke uwa.
Ọ zuru oken'agbanyeghị oge nke afọ.
Otú ọ dị, nke a na ụdị ike ọnọde usoro nke akwa ndọghachi azụ:
Nke dị ukwuu nha na ụgwọ n'ihi na ya akụrụngwa.
Mkpa maka saịtị nwere topography nke na-enye ohere iwu nke mmiri ahụ dịtụ mfe ma dịkwa ọnụ ala.
La mmepụta oge, n'agbanyeghị agbanyeghị amụma, nke ike.
Ihe ga-ekwe omume emerụ mmetụta na gburugburu ebe obibi dị ka ọdịda, mbelata nke mmiri estuarine, nke ọtụtụ nnụnụ na ihe ndị dị n'okirikiri mmiri na-adabere, Mbelata ebe a na-azụlite maka ụdị mmiri na mkpokọta nsị na-emetọ mmiri na estuaries nke osimiri na-enye.
Amachibidoro ịnweta ọdụ ụgbọ mmiri emi odude ke enyọn̄-enyọn̄.
Ihe ndọghachi azụ nke ụdị ike a na-eme ka arụmụka ya bụrụ nnukwu arụmụka, yabụ na itinye ya n'ọrụ nwere ike ọ gaghị adaba ma ọ gwụla ma ọ bụ n'okwu a kapịrị ọnụ, nke a chọpụtara na mmetụta ya dị obere ma e jiri ya tụnyere uru ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Ike mmiri » Ike mmiri ma ọ bụ ike ikuku
clemente nnupụisi dijo
Ọtụtụ afọ gara aga, ejisiri m ike tie mkpu "Eureka!" (Archimedes) mgbe m nwere nnwale nke ụlọ m, m mezuru usoro dị mfe nke EOTRAC, nke naanị na-erite uru nke ike dị elu nke ifufe, nnukwu olu nke ike a na-enweghị ngwụcha, nke a na-ejedebe naanị na mgbochi nke ihe ndị ahụ. Mgbe ahụ, enwetara m usoro dị mfe nke GEM nke na-enye ohere iji iche ike na-enweghị njedebe nke mmụba nke na-arụ ọrụ elu (narị) narị otu narị ma ọ bụ puku puku mita anọ na ọrụ yiri ya na-emezu ebili mmiri, na ihe ndị ọzọ - na ndị ọzọ. dara ụda - akpọ m mkpu "Eureka! Eureka!" Maka obere ájá a iji mepụta ume dị ọcha, ọ dị nwute na ndị dị ike nke okpomoku zuru ụwa ọnụ na-agbachi nkịtị ma ọ bụ were m "akụ". LEE nnupụisi-mepụtara na ekwentị
Abụ m onye ezumike nká dị mfe a mụrụ na 1938, Ọ dịghị onye na-enye m bọl, Achọrọ m ka anyị niile hụ, ghọta ma na-arụrịta ụka banyere ike nke okike n'onwe ya nwere ike ịmepụta ume dị ọcha iji belata GHG ma gbochie okpomoku zuru ụwa ọnụ (ọkụ ụwa) na-ebibi ọtụtụ na ndị ọzọ ohere nke ndu mmadu n'elu uwa.
Zaghachi to clemente rebich
Nnukwu ngwere na-apụ n'anya na Canary Islands
Mbido nke biomass na Spain